Gobalka Liibaan & Tababarkii Macalimiinta Luuqada Afka-Hooyo - Cakaara News
Gobalka Liibaan & Tababarkii Macalimiinta Luuqada Afka-Hooyo
Fiiltu(CN) jumce 5 February 2016, waxaa si habsami ah loogu soo gabagabeeyay Xarunta Gobalka liiban ee Magaalada fiiltu tababar lagu kobcinayay aqoonta Barrayaasha Afka-soomaaliga ee dhamaan Dagmooyinka uu Gobalku ka koobanyahay.
Tababarkan ayaa waxaa lagu tababarayay in ka badan 236 Bare, oo macalimiin ka ah dhamaan Dugsiyada Dagmooyinka Gobalka liibaan, waxaana lagu barayay casharo kusaabsan nidaamka baris barasho ee luuqada Afka-soomaaliga, iyo waliba culuumaha kala duwan ee luuqadu leedahay, waxaana casharada tababarka bixinaya khabiiro heer deegaana oo kasocday Xafiiska Waxbarashada DDSI.
Hadaba tababarkan ayaa waxaa uga waramay shabakada cakaaranews hogaamiyaha kooxda tababarka bixinaysay ahna khabiir katirsan Xafiiska Waxbarashada DDSI Mudane Nuur Cabdi Haajir oo sheegay in tababarku uu maanta sifiican ugu soo gaba gaboobay macalimiinta luuqaada afka soomaaliga kadib markii uu socday 10 maalmood. Waxaa kale oo uu sheegay khabiirku in casharo muhiima ay barteen intii uu socday tababarka.
Sidookale waxaa dhankooda ka warbixiyay macalimiintii tababarka qaadanaysay oo sheegay in ay aqoon badan u korodhay islamarkaana ay sifiiican uga faa iidaynayaan dhamaan ardaydii iyo dugsiyadii ay kayimaadeen.